Wednesday October 24, 2018 - 15:25:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya Pakistan ayaa sheegaya in xabsi kuyaal magaalada Karaaji oo ammaankiisa si aad ah loo adkeeyo lagasii daayay Mulla Baradaar oo horay usoo noqday hoggaamiyaha Melleteriga Talibaan ahna mid ahaa afartii Nin ee aas aastay xarakada horraantii sanaddii 1994.
Ilo wareedyo uu soo xiganayo wargeyska The News International ee kasoo baxa wadanka Pakistan ayuu ku sheegay in sii daysmada Baradaar ay timid kadib dadaal dheeri ah oo uu sameeyay xafiiska Taliban ee magaalada Dooxa wadanka Qadar.
Wafdi ka socday dowladda Qadar oo booqday magaalada Islam'abad ayaa la sheegay in uu mas'uul ka ahaa in lasii daayo Mulla Baradaar oo ah hoggaamiye ruug caddaa ah islamarkaana ahaa Ninkii dajiyay dagaalka Ku dhufo oo ka dhaqaaq ee hadda Afghanistan ka socda.
Sanaddii 2010 ayay melleteriga Pakistan Baradaar ka xireen magaalada Karaaji balse sanaddii 2013 waxaa soo baxay warar sheegayay in lasii daayay warkaas oo markii dambe beenoobay.
Mulla Abdul Ghani Baradar ayaa sanaddi 1968 ku dhashay gobolka Uruzgan ee wadanka Afghanistan, isagoo dhalinyaro ah ayuu kamid noqday raggii dagaalka lagalay ciidamadii Ruushka ee dalka qabsaday.
Sanaddii 1996-dii markii la aas-aasay imaarada islaamiga Afghanistan wuxuu noqday hoggaamiyaha mandiqadda galbeed ee wadanka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Kaabuul, wuxuu hoggaaminayay dagaalladii lalagalay dagaal oogayaashii ku kacsanaa imaarada islaamiga ah.
Sanaddii 2001 markii Mareykanka iyo xulufadiisu ixtilaaleen Afghanistan wuxuu ahaa Ninkii dajiyay dagaalka loo yaqaan Xarbul Cisaabaadka oo lagu dhiig bixiyay xulufada NATO, sidoo kale wuxuu kamid noqday mas'uuliyadda imaaraatka ee dhanka maaliyadda isagoo lacago Malaayiin dollar ah kasoo aruurin jiray muslimiinta dalka dibaddiisa kunool.
Abdul Ghani Baradar ayaa ah hoggaamiye Melleteri oo ay ka heybaystaan saraakiisha NATO ee Afghanistan ku duulay wuxuuna mas'uul ka ahaa Kumanaan weeraro ah oo NATO ku qabsaday wadanka sidoo kale wuxuu xeryaha tababarka kasoo saaray kumanaan kun oo dagaalyahanno mujaahidiin ah.
illaa iyo hadda Hoggaanka Xarakada Taliban kama hadlin sii daysmada Hoggaamiyahan caanka ah, bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray baaqyo wadahadal lagu dalbanayay oo ka imaanaya madaxda xukuumadda Kaabuul iyadoona xarakada Taliban ay gaashaanka udaruurtay taas bedelkeeda ay ogolaatay in ay gorgortan lagasho dowladda Mareykanka.